pamusoro 8 Career Options vane mari mari mu India
Asati achitarisa panze basa, chimwe chinhu kuti vose kazhinji anofunga ndiyo mari kana muhoro. Ehe, chido ndiko kunoita kuti ubudirire asi pakupera kwezuva, kana iwe dzokera vaneta kumusha, zvaunongoda imwe nyaradzo uye umbozha. saka, nguva dzose nani kuisa chinangwa chako pane imwe pakakwirira zvikuru apo unogona kutenga zvose zvinhu wokunyaradza pane zvinangwa diki. Kune mamwe mabasa zvinouya yakawanda perks pamwe muhoro. Following is a list of some of the top career options that would support you efficiently both financially and prestige wise.
In kuitika mabhizimisi zvizvarwa, yakakwirira mukurumbira rave ivakwe vanhu vane utariri uye multitasking unyanzvi. Hachisi zvinofadza chaizvo rwendo pamukova pamwero. zvisinei, kana iwe tawedzera kutora basa yakakwirira uye pakuita sarudzo pezvakaitwa, mari yenyu kwakawedzera. All zvaunoreva ari utariri dhigirii kubva yaizivikanwa sangano. Ndiwo sei CEOs Pari kuwana mari mu hombe. The makambani vanovavo kukupa perks siyana pamwe muhoro wako.
Doctors zvinodiwa marudzi ose yenjodzi ezvinhu uye unyanzvi hwavo hwaikosha ari muvanhu. Kamwe wava kugona Medicine, unogona kuenda mberi kutanga kukiriniki yako private apo zano kubhadhara anoenda chihombe chitsama. Kuva chiremba hazvirevi chete kundotora iwe mari asiwo mubayiro nemwi akawanda nomukurumbira munyika muvanhu. Vanachiremba vane mhando dzakasiyana, semuyenzaniso, vanachiremba vemazino, ophthalmologists nezvimwewo.
IT indasitiri huri kuwedzera pari. With zvemichina kutsiva ose emaoko basa, IT mhinduro vari kwokudiwa huru. Pane zvakawanda kuvimba-software uye kombiyuta inobva mafomu mazuva ano. saka, pane zvakawanda mukana uwane bundu chitsama.
Chartered Accountancy uye CFAs
Accountancy kunokosha chinhu ose akasimba. Iwe kuti vakabhadhara zvakawanda iwe zvinoda sezvazvakaita mumwe zvinokosha zvinodiwa nesangano. Kuchengeta mabhuku avo kuchakasimba, Auditing kunodiwa uye chikuru chikamu kuronga hurongwa ndiro gore negore mari kuronga. Nokudaro, CAS uye CFAs vane zvezvinotaurwa guru iri indasitiri.
Business zveefa chisimbiso panguva dzakasiyana-siyana, ndokusaka vanotarisira kuti vose vanamuzvinabhizimisi uye kuipa vanhu kubhururuka kazhinji. Vakagadzirira kupedza chihombe mari iri ndege. The yendege kwemauto huri kuwedzera imwe risingadaviriki nokukurumidza. saka, vezvikepe, ndege vashandi, pasi tsvimbo, mhepo nevanhu vaishanda vose ava nezvimwewo Zvinodiwa.
Entertainment chinhu indasitiri riri pamusoro uye pave hombe kuti upfumi hwose. The glamour Indasitiri achibata zvinoshamisa rakawandisa uye nyanzvi dzakaita vatambi, yokutevedzera, vemifananidzo chokuunganidza boka guru cheefa upfumi tisingabatanidzi basa ravo indasitiri kuburikidza zvokushambadza. Kamwe vakaita nzira vamene, denga muganhu wavo.
Sports haisi kapu yetii wose. Asi kana uri unyanzvi uye kuwana zvemitambo unyanzvi zvakanaka kubva pauduku, unotofanira kuita ani iwe mumunda. Hazvisi nyore basa, kuva vakatendeseka. asi, kamwe iwe kuti yako kuzivikanwa mumunda, iwe uwane mari kwete kubva mitambo kutamba asiwo kuita zvokushambadza uye okushambadza. Izvi zvinotungamirira nomukurumbira nenzira yakanaka kwazvo.
The pamusoro ndivo pamusoro 8 basa nzira umo makaropafadzwa ne mari mari uye mukurumbira panguva imwe chete. zvisinei, yakawanda nesimba, kuzvitsaurira uye kutevera gwara runodiwa.
« Happy Australia zuva 2018 zvido, Quotes, SMS, Messages, Images, Costumes
Tsamba mupepeti nezvemvura kutema matambudziko munguva monsoon mwaka »